Alu-Ergal Racing type 50mm sprocket type 428 PRO - Mora Racing Wolfgang Mohr
Alu-Ergal Racing Ø 50mm ụdị ube 428 PRO
Alu-Ergal Racing Ø 50mm ụdị ube 428 PRO Alu-Ergal Racing Ø 50mm ụdị ube 428 PRO mora-ije Alu-Ergal Racing type 50mm sprocket type 428 PRO High-Quality - 7075 aluminom - maka ihe dị oke mkpa - ndụ ogologo ọrụ ọrụ ọduọ ngwaahịa na axle wedge protection Ihe pụrụ iche: Site na nkedo a, akụkụ abụọ ahụ bụ laser mere - nkenke zuru oke! Uru: Enweghị ọdịiche dị n'etiti akụkụ abụọ nke wheel wheel - azụghị azụ axle / mebiri emebi!
Dị na ngwaahịa.
Ọdịdị dị elu - 7075 aluminom - maka nnukwu ihe chọrọ - ogologo ndụ ọrụ
ya na mkpọchi igbe
Ihe ozonich: Akụkụ abụọ nke osisi a na-abụ laser-machined n'otu n'otu - izu oke zuru oke!
Uru: Enweghị oghere dị n'etiti ogwe osisi abụọ ahụ - a na - ejikọtaghị / emebi emebi!